Juan Mata Oo Muran Gelinaya Mustaqbalkiisa Kooxda Manchester United Iyo Diirada Koox Weyn Oo Ree Talyaani Ah Oo Haysa Xiddigan – GOOL24.NET
Juan Mata Oo Muran Gelinaya Mustaqbalkiisa Kooxda Manchester United Iyo Diirada Koox Weyn Oo Ree Talyaani Ah Oo Haysa Xiddigan
October 31, 2018 Apdihakem Omer Adem
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Juan Mata ayaa u muuqda mid khal-khal xoogan galinaya mustaqbalkiisa kooxda xilli ay haatan diirada ku hayso kooxda horyaalka Serie A ee Juventus oo 30 jirkan u aragta mid ku haboon kooxdeeda.
Heshiiska Mata uu kula jiro kooxdiisa ayaa ah mid ku eeg dhammaadka xilli ciyaareedkan xilli aysan wali bilaaban wax wada xaajood ah oo lagu doonayo in qandaraaska xiddigan ree Spain lagu kordhiyo.
Juventus ayaa sanadihii ugu dambeeyay caadaysatay inay xiddigo waaweyn ku heshay qaab xor ah iyagoo il gaar ah markasta ku haya xiddigaha magacawa weyn leh balse uu qandaraaskoodu dhacayo waxaana kamid ah xiddigaha ay sida bilaashka ah kula wareegeen Patrice Evra, Sami Khedira, Dani Alves iyo Emre Can.
Mata ayaa wixii ka dambeeya dhammaadka sanadkan xaq u leh inuu si toos ah ula xaajoodo kooxaha ka baxsan horyaalada dalka England waana arrin ay fursad u aragto Juve.
Tababare Jose Mourinho ayaa la fahamsan yahay inuu si xoogan u doonayo in xiddigani qandaraaska kordhiyo isla markaana uu maamulka kooxda u sheegay inay hoos u eegaan qandaraaska xiddigan balse wadahadalo dhab ah ayaan wali furmin.
Kubad sameeyahan ayaa sidoo kale lala xidhiidhinayay inu ku laabanayo kooxaha dalkiisa Spain gaar ahaan kooxihii uu hore usoo matalay ee Valencia iyo Oviedo balse fursad uu ka helo Bianconeri oo awood ku haysata tartamada Talyaaniga ayaa ah mid soo jiidan karta.
Sababaha ugu waaweyn ee Mourinho u doonayo in Mata uu kusii sugnaado kooxda ayaa ah saamaynta wanaagsan ee uu ku leeyahay xaalada qolka labiska balse Mata ayaan marnaba loo balanqaadi karin inuu boos joogto ah ka helo safka koowaad ee kooxda.